ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အကြမ်းဖက်မှု ရန်ကုန်သံဃာများ ဆန္ဒပြ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ ကော့စ်ဘဇားခရိုင် ပန်းဝါ ခေါ် ရာမူးမြို့က ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်မြတ်တွေနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းတွေ မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရတာကို ဆန့်ကျင်တဲ့ အနေနဲ့ ရန်ကုန်မြို့ ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်းက မကွေးပရိယတ္တိ စာသင်တိုက်မှာ သံဃာအပါး ၂၀၀ ကျော်တို့က အာဏာပိုင်တွေ တားဆီးထားတဲ့ကြားက ဒီကနေ့ နေ့လည်ပိုင်းမှာ ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားနေသည့် ဗုဒ္ဓဘာသာအဆောက်အဦးများကို အကြမ်းဖက်ဖျက်ဆီးမှုများအပေါ် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအစိုးရ အနေနှင့် တားဆီးပေးရန် ရန်ကုန်မြို့ ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်းက မကွေးပရိယတ္တိ စာသင်တိုက်မှ သံဃာများ ၂၀၁၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၄ ရက်နေ့က ဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေကြစဉ်။ RFA
မကွေးပရိယတ္တိ စာသင်တိုက်ရှေ့မှာ သံဃာတော် နှစ်ပါးဆီ ယှဉ်တွဲလမ်းလျှောက်ကြပြီး ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်မြတ်တွေနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းတွေ မီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေ ရပ်တန့်ပေးဆိုတာကို ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် ဦးပါမောက္ခက ရှေ့က တိုင်ပေးပြီး သံဃာအပါး ၂၀၀ ကျော်က သံပြိုင် ကြွေးကြော်ခဲ့ကြပါတယ်။
"ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းတွေကို ရိုဟင်ဂျာတွေက မီးရှို့ပြီးတော့ ဖျက်ဆီးတယ်။ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွား ဆင်းတုတော်မြတ်တွေကို ခေါင်းဖြတ်တယ်။ အဲ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးတွေကို အကြမ်းဖက် နှိမ်နှင်းတယ်။ အဲ့ဒါကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အစိုးရကနေပြီးတော့ ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေါ် ကာကွယ်တားဆီးပေးဖို့ လို့ အဓိက ရည်ရွယ်တယ်။“
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ သံရုံးရှေ့မှာ ဆန္ဒပြပွဲပြုလုပ်ဖို့ကို ကမာရွတ်မြို့နယ် ရဲစခန်းမှာ ခွင့်ပြုချက်တောင်းခဲ့ပေမယ့် မရရှိခဲ့ကြပါဘူး။ ဒါ့အပြင် နိုင်ငံတော် သံဃာ့မဟာနာယက အဖွဲ့ကလည်း ဆန္ဒပြပွဲ မပြုလုပ်ဖို့ ခေါ်ယူ တားမြစ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Why couldn't express one own openion? Old Military Bureaucretics are still disturbing Democracy and freedom of people opinion. Please go out from administrative are of new Government. Not only civil Bureaucratic monk Bureaucratic too. Shwe Nya Wa Sayadaw's case, Bamaw Sadayardawgyi knew nothing.
Oct 05, 2012 11:18 PM
Why Government of Myanmar is still sleeping? President U Thein Sein's continued silence on the shameless cowardly Bengali Rohingya Muslims terrorists at Cox's bazer, Bangladesh. I think President should complaint to Bangladesh government. We are very respect and agree with the monks သံဃာများ who demostrate in front of Embassy of Bangladesh, Yangon. Why U Thein Sein afraid of Rohingya Muslim
Oct 05, 2012 11:16 PM
I want to tell U Thein Sein: "SILENCE IS GOLDEN or SILENCE IS FEAR???" Please you answer my question by complainting to Ambassador of Bangladesh in Yangon about Muslims destroy old Buddhist temples, pagodas, Buddhist houses and monasteries lawlessly and inhumanely.
Oct 05, 2012 06:21 AM
ပြည်သူတွေဟာြ ရန်ကုန်သံဃာများနဲ့ပူးပေါင်းဖို့ လိုအပ်ကြောင်း Oct 04, 2012 09:18 PM